रमेश प्रसाईलाई सहयात्री होईन्, नेशनल टेलीविजनको प्रस्तोता हुने रहर (भिडियो)
एच बि ताम्राकार,
रमेश प्रसाई एक बहुआयामीक पात्र हुन् । नेपालको पूर्वबाट उदाएका एक चम्किला तारा हुन्। स्पष्ट बक्तासंगै तिखो वुद्धी भएका एक युवक हुन् । देशकालागि आवाज उठाउने एक स्वाभिमानी युवा हुन् ।सामाजिक संञ्जालमा धेरैले लेख्नु भयो , सवैको विचारको उच्च सम्मान छ ।फरक तरिकाले मेरा केहि धारणाहरु राख्ने अनुमति चाहन्छु । यदि कसैको भावना र विचारसंग थोरै केहि प्रशंग मिल्न गयो भनेपनि मात्र संयोग हुनेछ ।
जिवन एक निरन्तर बगिरहने खोला हो । खोला रोक्न खोजे कमजोर भागबाट कटानी भएर कुनै एक निश्चित गन्तव्य भएर बगिरहन्छ ।हाम्रो मनमा गुम्सिएर बसेका विचाहरुपनि हामीहरुले कुनै न कुनै माध्यमबाट स्वस्थ तरिकाले बाहिर ल्याउनैपर्ने हुन्छ । अन्यथा ति विचारहरु त्यतिकै विलीन भएर जान्छन् वा मनमा भार भएर बसिरहेका हुन्छन् ।रमेश प्रसाई पब्लिक स्पीकर सिजन २ का विजेता हुन् । मेरो बडो सम्मान र अन्जुली भरिको मायॉं छ मित्र रमेश प्रसाई जीलाई ।सवैसंग बहस गरिरहेको छु ।
मेरो प्रयास थियो , रमेश प्रसाई जी लाई मेरो कार्यक्रमको मुख्य अतिथि बनाउने । तर , सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेको थिए , सफल हुन पाईन् । पक्कैपनि छिट्टै सम्पर्कमा जोडिने छौ किनकी यो पृथ्वी भित्रका हामी सवै सदस्य हौ त्यो भन्दापनि नेपाली हौ। हामी दुवै नेपाली युवा भएकालेपनि आफ्नै देशको भुभागको कुनै स्थानमा हामी अवस्य एकदिन ठोक्किन पुग्ने छौ । प्रयास गर्न जारी राखे । विजेता होईन , उपविजेतासंग संवाद गर्ने मौका जुरेको थियो । पब्लिक स्पीकर सिजन २ का उपविजेता मित्र प्रनव काफ्ले जी ले मेरो आग्रहलाई सजिलै स्वाकार्नु भयो ।
रमेश जी र प्रनव जी को प्रस्तुती अत्यन्तै राम्रो लागेको थियो । मैले प्रनव जी लाई प्रश्न गरे , रमेश जी विजयी हुनुमा खुसी हुनुहुन्छ भनेर ? उहाले हासेरै जवाफ दिनु भयो । रमेश जी विजयी भएकोमा एकदमै खुसी छु तर विजेता बन्ने इच्छा आफ्नो पनि भएको औल्याउनु भयो ।रमेश जी को पब्लिक सम्बन्ध पहिलेदेखी नै अत्यन्त राम्रो थियो ।पूर्वको शेर भन्न रुचाउन्छु । गणतन्त्रीक एफएमको कार्यक्रमा मुलधारका राजनितिज्ञदेखी अन्य धेरै व्यक्तित्वहरुलाई कडा अनि सिधा प्रश्न गरेर ढलाउने स्पष्ट बक्ता हुन् । शारीरिक र मानसिक रुपले मेरो विचारमा नेपालकै एक मजबुद युवा हुन् ।
आखॉं भएर मात्र सब थोक हुने र आखॉं भएन भने केहि नहुने भन्ने बुझाई गलत साबित भएका छन् । नेपाल आईडलबाट सिजन १ बाट उदाएकी मेनुका पौडेल अब्बल गायिका हुन् । उनको कोइलीको जस्तो सदाबहार स्वरको म फ्यान नै हु । सफलताको चुचुरोमा पुग्न आखॉंले पक्कै छेकेन । मेनुका बहिनी नेपाल आईडलबाट बाहिरिएपछी पहिलो अन्तरवार्ता लिने पात्र मै हु । पूर्वको समृद्ध राष्ट्र जापानको पनि चुकुवा विश्वविघालयको प्रोफ़ेसर तथा नेपालमै पिएचडी गर्ने पहिलो दृष्टिविहिन हुन कमल लामिछाने सर । युवाहरुको मन र मुटुमा बस्न सफल छन् । कमल सरसंग टोकियो को ग्रैण्ड मोटिभेश्नल अभियनकै कार्यक्रमा भेट भएको थियो । त्यसपछी पटक पटक भेट भयो । दुई पटक अन्तरवार्तापनि लिए । विवाहित हुनुहुन्छ । यि पात्रहरु सवै सफल छन् ।
रमेश प्रसाईले १ लाख रासकोट हस्पिटल निर्माणकालागि सहयोग गर्नु भयो । रवि लामिछाने , दिपक बोहरा , मुकुल ढकाल को उपस्थितिमा सहयोग हस्तान्तरण गर्दै गरेको दृष्य ले धेरैको मन छोयो ।मनैबाट केहि गरौ भन्ने सोचेर , गरिवीले सताउदासताउदैपनि मन फराकिलो पारेर सहयोग गरेको दृष्य आफैमा एतिहासिक बन्यो । सुनौले अक्षरले मैले मेरो मनको दरवारमै त्यो तस्बिर कहिले नमेटिने गरी टासिसके ।डिग्री पढ्दै गरेका र सुन्दर भविश्यको खोजीमा कुदिरहेका मिहिनेती युवा रमेश प्रसाई जी संग आफ्नो जिवनको निर्णय लिने अधिकार छ । जन्म , विवाह र मृत्य तोकेर आउने कुरो होईन् ।सहयात्री भएर मात्र पुग्दैन् । राम्रोसंग आफुलाई बुझ्ने सहयात्री खोज्न रमेश जी संक्षम भइसकेका छन् । अरुले सहयात्रीको आवश्यकताको महशुस गर्नु फ्यानको हिसावले ठीकै होला ।
आफ्नो जिवनको महत्वपूर्ण पक्ष भित्र विवाह पर्छ । यो बारेमा हामीहरुको आग्रह दवाब सरह हो, त्यसैले दवाब दिनु व्यतिलाई कमजोर पार्नु हो । भ्रखर आफ्नो भविश्य को खोजीमा दौडिरहेका शेरलाई साहानुभुति र सहयोग को आवश्यकता छ । त्यसैले अर्थहिन कुरा मा समय खर्चिनु भन्दै रासकोट हस्पिटल र गौतम बुद्ध क्रिकेट स्टेडियम तिर लागौ ।निलमनी भण्डारी जी को पनि विवाह भएको थियो । तर , जिवन साथीले धोका दिदा , रुदै सम्बन्ध विच्छेद भइसकेपछी मार्मीक पत्र लेख्नु भएको थियो ।सहयात्री भए मात्र सफ़ल हुनसक्ने नत्र असफल हुने भन्नु सरासर गलत ।मानविय सेवा नै धर्म हो ।
सकिन्छ भने , सहयात्री मात्रै किन एक असल मित्र , छोरा , भाई वा दाई सम्झेर पनि सेवा गर्न सकिन्छ । बरु सकिन्छ भने व्यक्तिको ईच्छा पुरा गर्न आफ्नो तर्फबाट भुमिका खेलौ । रमेश प्रसाई जी एक अन्तरवार्ता मा भनेको कुरा याद छ । फ़ायरसाईड , टफटक , दिशानिर्देश जस्ता कार्यक्रमबाट पहिले देखी नै प्रभावित हुनुहुन्छ । नेश्नल टेलिभिजनमा रमेश जी ले “टक सो” चलाउने इच्छा जाहेर गर्नु भएको छ । यो इच्छा पुरा हुनेमा म ढुक्कु छु । मेरो तर्फबाट अग्रिम शुभकामना छ । म एक फ्यान भएको नाताले मैले रमेश जी को बारेमा आफ्नो भावना सकरात्मक तरिकाले पोख्ने अधिकार छ ।
यसमा यो ठिक यो वेठिक भनेर जज बन्न कसैको नैतिकताले दिदैन् । भावनालाई ठेस पुग्ने कुरा बोल्नु हुदैन् । तर , मानवताको भवनाले भरिएको एक व्यक्तिको नाताले म मेरो अंगहरु दान गर्छु भन्न नपाउने ।मन साघुरो पारेर विचार प्रस्तुत गर्ने बानी आफैमा टिकाउ छैन् । क्षणिक आनन्द दिन जे नि भुक्न पाउने अधिकार नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख छैन् । आफुले आफ्नो आखॉं , मुटु जस्ता महत्वपूर्ण अंगहरु दान गर्न सक्ने अधिकार जुन कुनै पनि व्यक्तिसंग छ । आफ्न अंग नै दिन तयार जो कोहीपनि महान मनका नारी वा पुरुषको सम्मान राष्ट्रदेखी अन्तराष्ट्रीय स्थरसम्म हुनुपर्छ भनेर जोडदार माग राख्न चाहन्छु । रमेश जी जे छन् , ठीक छन् । रमेश जी देशको चम्किलो तारा हुन् ।
यो तारा कुनै ठाउबाटपनि खस्न दिनुहुन्न । स्वतन्त्र तारा हुन् । तिन करोड नेपालीका तारा हुन् । त्यसैले पवित्र अनि स्वतन्त्र व्यक्तिको छायॉं रमेश जी माथी छ । आत्तिएर कुहिएका पखेटाहरु जोडेर उड्न खोज्नेहरु , गलत राजिनिती गर्नेहरु, राजनेता भनेर पुजा गर्ने र आफ्नै भविश्यको ठेगाना नभएका ठेकेदारहरु बडो गम्भिर भएर भुक्नु भन्दा वर्तमान समयमा रवि लामिछाने , अपिल त्रीपाटी, कुलमान घिसीङ् , महावीर पुन , रमेश प्रसाई, कमल लामिछाने , धुर्मुस-सुन्तली , केपी खनाल लगायतको कामको सम्मान गर्दै देश वनाउने अभियानमा लागौ । रमेश प्रसाईहरुलाई प्रेरणाको स्रोतका रुपमा सम्झिदै , माथी उठाऔ र सकरात्मक परिवर्तनको खोजीमा सवै लागौ । आलोचना र खुट्टा तान्ने अभियानमा होईन्, सत्य बोल्दै देशको झण्डामुनी बस्ने चाहना बोकौ । जय देश , जय स्वाभिमान ।।
रमेश प्रसाइ किन खनिए ? युटुबर कै कारण रो,गिले उपचार, पिडि,तले न्या,य, भो,काले पेट भर्न पाएको बिर्सेछन सायद रमेशले ? (भिडियो सहित)
मिस नेपाल नर्थ अमेरिकाको आवेदन समाप्तिसंगै धमाधम प्रतियोगीको पूर्व परीक्षण जारी ,साहना बज्राचार्य कार्यक्रम प्रस्तोता हुने